2018 - Page 2 of 76 - Puntland Mirror Believable Media Website
December 24, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Isimada Puntland oo ayaamahaan shirar uga socdeen magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa maanta soo saaray bayaan. Bayaanka ay soo saareen isimada ayaa ku aadanaa doorashada madaxweynaha Puntland. Qodobada ayaa kala ah: 1. […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa saakay oo Isniin ah dil toogasho ah ku fulisay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir oo katirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha maxkamada, Shaacir ayaa lagu helay in uu […]
December 23, 2018 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay, ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa la kulmay hanjabaadyo kaga timid Daacish, oo sidoo kale loo yaqaan ISIS. Mid kamid ah ganacsatada, oo magaciisa qariyay, ayaa bog wareedka Puntland Mirror […]
Bosaso-(Puntland Mirror) Over the past few months, the traders in Bosaso town witnessed threats from Islamic State, also known as ISIS, a trader said. One of the traders, who spoke on condition of anonymity, told […]
December 22, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dadka ku dhintay labo qarax oo maanta oo Sabti ah ka dhacay Muqdisho ayaa gaartay 13 qof, sida ay sheegeen masuuliyiinta dowladda. Dadka ku dhintay qaraxyada ayaa ahaa shacab, askar iyo suxufi. […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mid kamid ah wariyeyaasha caanka ah ee Soomaaliya ayaa kamid ahaa dadkii ku dhintay qaraxyo ka dhacay Muqdisho maanta oo Sabti ah. Cawil Daahir Salaad, labo ilaaladiisa kamid ah iyo darawalkiisii ayaa ku […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan todobo qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha dowladda. Qaraxa ayaa ka dhacay meel qiyaastii 400 kiilomitir u jirta xarunta […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Cabdirisaaq Xuseen Nuur Dirir u magacaabay guddoomiyaha gobolka Mudug, sida lagu sheegay bayaan maanta oo Sabti ah kasoo baxay xafiiska madaxtooyada. Cabdirisaaq ayaa badali doona Xasan […]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Midowga Afrika ayaa ka codsaday Burundi in ay dhinto 1,000 kamid ah ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya marka la gaaro bisha Febaraayo ee sanadka soo socda iyada oo qayb ka ah barnaamij tartiib […]
December 21, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Khamiistii dib uga laabtay tilaabo ay ku doonayeen in mooshin laga keeno madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Cabdirixmaan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in mooshinkii […]